ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: Happy Birthday Wathann Oo !
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 9:09 AM
soe mya nandar thet lwin said...
Happy Birthday Wathann Oo.....,
May you haveahappiness and success in your life!!
Have funs and enjoy your special day..
အခုလို ကျနော့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဘာမှတော့ မကျွေးတော့ဘူးနော်။ နောက်လူချင်းတွေ့မှ မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်။ မွေးနေ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မငြင်းပါဘူး.. အဟီး..
ချဲလ်ဆီးချစ်သူများ အားလုံးလည်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
စည်းလုံးညီညွတ်သော ချဲလ်ဆီးချစ်သူများ ထာဝရအဓွန့်ရှည်တည်တံ့ပါစေ
၂၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ချစ်သောမိသားစုနှင့်အတူ ရည်မှန်းထားရာ ပန်းတိုင်ကို လျှောက်လှမ်းတိုင်း ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀တစ်ထပ်တည်းကျပါစေရှင်...